Abuurka & Horumarka 3M - 900 BUSH AVENUE: GURIGA CIMI BAADHIDU DHISTAY | Saint Paul Historical
900 BUSH AVENUE: GURIGA CIMI BAADHIDU DHISTAY
Sanadihii hore ee Saint Paul
Marka Shirkada Macdanta iyo Warshadaynta Minnesota ay ka soo guurtay Duluth una soo guurtay Saint Paul 1920, dhammaan xafiisyada shirkada iyo hawlagalada warshadaynta waxaa hoy u ahayd dhisme yar oo ku yalay Forest Street oo ku dhinactaalay khadadka tareenka ee Dayton’s Bluff. Marka guul laga gaadhay warqaddaha baalayska, 3M waxay isku balaadhisay dhisme labbaad sanadii 1919. Xafiisyadu waxay ku yaaleen dabaqa labbaad. Horumarinta warqadda baalayska “Wetordry” ee1921 iyo xabagta meesha aan la rinjiyaynayn lagu xidho ee 1925 waxay keentay muddo koboc waara ah. Dhismaha 3 waxaa lagu daray warshada warqadda baalayska 1923 iyo Dhismaha 12 ee kala saarida macdanta ee 1928. Marxaladda koowaad ee dhismaha 14 waxaa laga dhisay Fauquier Avenue, galbeedka Dhismaha 2, 1929 si loo balaadhiyo xarunmaha warshadda. Dhismaha 20, galbeedka Dhismaha 14, waxa uu ku daray xataa awood warshadayn oo dhaaraad ah.
Koboca Saint Paul
Marka alaab badan la horumariyay oo iibku kordhay, xafiis badan iyo meel warshadeed ayaa loo baahday. 1937, maamulaha shirkada William L. McKnight waxa uu ku dhawaaqay barnaamijka balaadhnta nus milyan doolar ah oo ay ku jirtay Dhismaha 20 ee warshadaynta 1937-1938 iyo dhismaha 21 sidii xafiisyada maamulka cusub ee 1939-1940. Dhismaha 22, 23, iyo 24 waxaa loo dhisay cilmi badhida xabagta wax lagu baadho iyo warshadaynta ka dib tobanka sano ee ku xigay. Dhismaha 42 waxaa la dhisay 1950-1951 si uu u qaado shaqaalaha xafiisyada kordhaya ee shirkada, waaxda iibka, iyo maamulayaasha qaybaha, ka dib dib-isku baabulkii 1948. Markay 3M ballaadhatay, waxay dhul hanti ah ka heshay xaafada iyo guryihii jiray ee la dumiyay si ay goobo u siiso Dhismaha 24, taallada biyaha, iyo meesha baabuurta la dhigto ee ku xigta.
Laga bilaabo Saint Paul ilaa ay ka noqotay Shirkada Caalami ah
Dhismaha maamulka waxa uu ku yaalay xarunta horumarka ee istaraatiijiyadaha shirkada ee cilmi baadhida, horumarinta wax soo saarka, iyo kala duwanaanshaha alaabta. 3M qaybta caalamiga ah sidoo kale waxay xarun u ahayd dhismahan. Xarumaha shirkada waxaa loo raray dhisme cusub oo ku yaala Xarunta 3M ee Maplewood 1962. Warshadda Saint Paul waxay shaqaynaysa ilaa 2009.
Dhismaha 1: Dhismaha 1 sanadihii hore. ~ Source: Minnesota Historical Society
Dhismaha 2 ( bidix) iyo Dhismaha 1 (midig), Forest Street, sanadkii 1921. ~ Source: Minnesota History Center
Ballaadhinta Dhimaha Dhismaha 20 sanadkii 1940, oo u jeeda bariga Fauquier (hadda Bush) Avenue. ~ Source: Minnesota Historical Society
Dhismaha 21, 900 Fauquier (hadda Bush) Avenue, la dhammaystiray 1940. ~ Source: Minnesota Historical Society
Dhismaha 24 (bidix) iyo Dhismaha 22 (midig), Mendota Street, abaaro 1952. ~ Source: Minnesota Historical Society
Dhismaha 42, Mendota Street iyo Reaney Avenue, sanadkii 1952. ~ Source: Minnesota Historical Society
Xarunta 3M sanadkii 1956 ~ Source: Minnesota History Center
Bandhiga Alaabta 3M gudaha Dhismaha 21, 1944 ~ Source: Minnesota Historical Society
Khariidada xarumaha 1958 ~ Source: Minnesota Historical Society
Xafiisyada maamulka 3M horaantii 1960naadkii ~ Source: Minnesota Historical Society
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “Abuurka & Horumarka 3M
,” Saint Paul Historical, accessed December 18, 2018, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/381.